प्रदेश २ : विकासका आधार | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण प्रदेश २ : विकासका आधार
लेख | दृष्टिकोण 68 views
प्रदेश २ : विकासका आधार
यति बेला तीनै तहका सरकारले सुशासन र विकासको प्रत्याभूतिलाई आफ्नो अभीष्ट मानेका खबर दैनिकजसो पढ्न र सुन्न पाइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस्ता कार्ययोजनाका फेहरिस्त सार्वजनिक गरिरहेका छन् । समृद्धिका सम्भावनालाई समेटेर पनि विकासका औसत आयामहरूमा निकै पछाडि देखिएको २ नम्बर प्रदेशको नेतृत्वले पनि विकासका योजना र उपायका छलफललाई तीव्रता दिएको पाइएको छ । यो प्रदेशको विकासका लागि स्रोतसाधनको कमी औंल्याइएको छ । तर, सम्भाव्यता धेरै छन्, यसको उचित दोहन हुन नसकेको मात्र हो । यो आलेखेको अभिप्राय २ नम्बर प्रदेशको दिगो आर्थिक समृद्धि र जनस्तरमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुन सक्छ भन्ने नै हो ।
वास्तवमा सुशासन आफैमा लक्ष्य होइन । कुनै पनि राज्यका लागि यो पूर्वशर्त हो । शासितले शासकबाट सुशासन चाहेको हुन्छ । राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र यसका वाहक हुन् । यसकै आधारमा राज्यको उन्नति निहीत हुन्छ । विकासमा धर्म, अर्थ, काम र मोक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ । सुख र शान्ति जुनसुकै धर्मको लक्ष्य हुन्छ । धर्म भनेको आचारसंहिता हो । यो व्यक्ति, समाज र राजनीति सबैमा लागू हुन्छ ।
आचारसंहिताको पालना गरेर अर्थ आर्जन गर्नुपर्छ । धर्म र अर्थको उचित संयोजन भए काम (इच्छा) परिमार्जित हुन्छ । अभीष्टमा मितव्ययिता आउँछ । अर्थात्, धर्म र अर्थसँग जोडिएको जीविकोपार्जनले कामनालाई सन्तुलित गर्छ । त्यो भएमात्र मोक्ष (सुख) प्राप्त हुन्छ । आचारसंहिताभित्रको अर्थोपार्जनले शासितलाई सुख र समृृद्धि प्राप्त हुन्छ । आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य र रणनीति फरक हुन सक्छन् । तर, सुशासन यसका निम्ति अकाट्य आवश्यकता हो ।
प्रदेश नम्बर २ का सन्दर्भमा समृद्धिका आवश्यकता आयाम अनेक हुन सक्छन् । सबै कुरालाई समेट्न थाल्यौं भने निचोडमा पुग्न सकिन्न । कुनै पनि उद्देश्यको प्राप्तिका लागि स्रोतसाधन खन्याउनुपर्छ । कम्तीमा ‘क्रिटिकल मास’को तहसम्म पुग्नुपर्छ । सबैतिर लगानी छरिन थाल्यो भने सहज हुँदैन । यो त हामीले राष्ट्रिय सन्दर्भमा अनुभव गरिसक्यौं । यो प्रदेशको सापेक्ष विकासका निम्ति हामीले षट्कोणीय अवधारणालाई अघि बढाउँदा सहज हुनेछ । उद्योग–व्यापार, कृषि र पर्यटनलाई विकासका मूल आधारको रूपमा स्थापित गरेर त्यसको परिपूर्तिका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यावरणलाई पूरक आधार बनाइनुपर्छ । यसबाट निम्नानुसार लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा पर्ने वीरगञ्ज औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित क्षेत्र हो । वीरगञ्जले उद्योग र व्यापारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । उद्योग–व्यापारले कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काम गर्छ । उद्योग–व्यापार नै वीरगञ्जको विशिष्टता हो । भौगोलिक अवस्थिति र उपलब्ध भौतिक संरचनाका कारण पनि यो क्षेत्रलाई विकासका अन्य स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन । त्यसैगरी जनकपुर धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्र हो । जानकी मन्दिर र इतिहाससँग जोडिएको थलो भएकाले यसलाई सांस्कृतिक रूपमा लिइएको छ । यो क्षेत्र पर्यटनको हब बन्न सक्छ । तर, अहिलेसम्मको औसत पर्यटन ट्रेकिङमा मात्र सीमित भएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा यसको विकास कसरी गर्ने ? जकनपुरसित सांस्कृतिक र धार्मिक आस्था जोडिएकाले यसलाई केन्द्र बनाएर अयोध्या, वराहक्षेत्र, पशुपतिनाथसम्मको करीब १ सय किलोमीटरको परिधिलाई प्याकेजका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । पर्यटन भनेको तीर्थाटनमात्र होइन, यसलाई पर्यटनका अनेक आयाममा जोड्न सकिन्छ । धर्म र सांस्कृतिक आस्थाको धरोहरलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो रचनात्मकता कसरी देखाउने भन्ने हामीमा निर्भर छ ।
वीरगञ्ज र जनकपुरलाई जोड्दा उद्योग–व्यापार र पर्यटनको मोडेल बन्छ । कृषि दुवै क्षेत्रसित अन्तर्निहीत सम्भावना हो । तर, अहिलेको खेती बूढापाकाको भरमा चलेको छ । युवा जनशक्ति देशबाहिर गएको छ । खेतीमा वितृष्णा छ । खेतीले समाजमा प्रतिष्ठा प्रदान गरेन भन्ने छ । यसकारण विदेशिएका युवालाई यहाँ ल्याएर कृषिमा जोड्नुपर्छ । यसका लागि आयस्तर अभिवृद्धि हुनुपर्छ । खेतीलाई उत्पादनसँग जोड्नु अनिवार्य छ । भूखण्डीकरण र जलवायु परिवर्तनले खेतीको प्रविधिमा नै परिवर्तन आएको छ । अब थोरै जमीन र कम सिँचाइमा हुने खालको खेतीको आवश्यकता छ । हिजोको कृषक खेतीको प्रविधिको पनि मालिक बन्नुपर्ने अवस्था आज फेरिइसकेको छ । ट्याक्टर, थ्रेसर, सिँचाइका पम्पसेटजस्ता उपकरण आज ‘आउट सोर्सिङ’बाट हुन थालेको छ । आधुनिक प्रविधि र प्रणालीको प्रयोग युवाबाटै सम्भव छ ।
लगानी विकासको पूर्वशर्त हो । लगानी आधुनिक र प्रविधियुक्त हुनुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । २ नम्बर लगानीकर्ताको आधारभूमि र विकासको अवसर पनि हो । उनीहरूले आफूले मात्र लगानी गर्दैनन्, बाहिरबाट पनि लगानी ल्याउन सक्छन् । यो प्रदेशको नेतृत्वले उदार अर्थतन्त्रका आशङ्कालाई निकास दिन सक्यो भने त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउँछ । यसकारण बजार अर्थतन्त्रमा २ नम्बर प्रदेशको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई विकासको चालक सीटमा राख्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । लगानीका लागि कानूनहरूको पुनरवलोकन गर्नु जरुरी छ । यसमा विषयविज्ञको सहयोग लिन सकिन्छ । प्रदेशले आफ्नो आवश्यकताअनुसारका दक्ष कर्मचारी नियुक्त गर्दा उद्देश्यमा पुग्न सहज हुन्छ । कनेक्टिभिटी सहज हुनुपर्छ । अहिलेसम्म यो उद्योग, व्यापार र पर्यटनलाई लक्षित गरिएकै छैन । काठमाडौंलाई जोड्नमात्र बनाइएको छ ।
उद्योग–व्यवसाय, पर्यटन र कृषिका निम्ति मानव संसाधन चाहिन्छ । यो योग्य र दक्षतायुक्त हुनुपर्छ । यो प्रदेशमा जनसङ्ख्याको कमी छैन । तर, शिक्षाको भने अभाव छ । उच्चशिक्षामा २ नम्बर प्रदेश कमजोर छ । शिक्षामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । विकासमा सबै आयाममा शिक्षाको बलियो आधार चाहिन्छ । तर, अहिलेसम्मको शिक्षाप्रणाली औपचारिक छ । यो प्रदेशको शिक्षा आधुनिक र प्राविधिक हुनुपर्छ । शिक्षालाई भावनात्मक बनाएर भाषा र माध्यममा अल्झिनु हुँदैन । यो प्रविधिको समय हो । प्रारम्भिक बेलादेखि नै यो समावेश हुनुपर्छ । विद्यालयस्तरपछिको शिक्षा प्रविधिक हुनुपर्छ । यो प्रदेशको शिक्षा कृषि, व्यवस्थापन, उद्योग प्रविधि र पर्यटनलक्षित हुनुपर्छ । यहाँको शिक्षाको गुणस्तरीयता अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उदाहरणीय हुनुपर्छ ।
मानिस स्वस्थ्य नभई शिक्षित र कर्मठ हुन सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ अहिलेसम्म बिरामी भएपछि उपचार गर्ने अभ्यास छ । बिमारीलाई प्रतिरोध गर्ने विधि बस्न सकेको छैन । उपचार कठिन र महँगो हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच छैन । २ नम्बर प्रदेशले स्वास्थ्यबारे नयाँ अवधारणासहितको योजना ल्याउनुपर्छ । यो प्रदेशमा कस्तो खालको बिमारी हुने गरेको छ ? त्यसका सम्भावित कारण केके हुन् ? त्यो पत्ता लगाएर रोकथाममा जोड दिनुपर्छ । जीवनशैली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रिकृत बनाइनुपर्छ ।
पर्यावरणको क्षयीकरणले मानिसको जीवनशैली बिग्रिन्छ । यसलाई बचाउने व्यवहार हुनुपर्छ । उद्योगलाई यसको कारण मानिए पनि हामीकहाँ अहिलेसम्म त्यति उद्योग आएको छैन । यसकारण पर्यावरण विनासको समस्या खासै छैन । अबको औद्योगिकीकरण पर्यावरणमैत्री हुनुपर्छ । पर्यावरण विगार्ने गरी उद्योगलाई अनुमति दिनु हुँदैन । पर्यावरणको जगेर्ना कृषि र पर्यटनको गुणस्तर अभिवृद्धिका आधार हुन् । विकासको नीति पर्यावरणलाई मध्यभागमा राखेर बनाइनुपर्छ । उल्लिखित अवधारणालाई विकासको आधार भागमा स्थापित गरेर विकास गन्तव्यमा अघि बढ्दामात्र २ नम्बर प्रदेशको लक्षित समृद्धि सहज हुनेछ । विकासको अभीष्ट एकै भए पनि परिवर्तित अर्थराजनीतिक परिदृश्यमा लक्ष्यमा पुग्न नयाँ सोच र शैलीको भने खाँचो छ ।